Mpanamboatra sy mpamatsy amboaran-kisoa otrikaretina China Auto Marshine
1) Ny fonosana Pipe azo avela dia mora ny manampy sy manala ny kaopy amin'ny fantsona.
2) Tsy takiana izany fa hamonjy fotoana ary hanamora ny zavatra ho anao. Raha miakatra mivantana amin'ny fantsona ianao dia manimba ny rafitrao raha esorinao ilay kaopy. Ireo bracket dia mampindrana kokoa ny rafitra misy anao.
3) Ny fomba tsara indrindra hanondrahana ny akoho efa lehibe.
Misotro amin'ny akoho ny akoho, izay ahafahan'ny rano miditra ao anaty kaopy.
Kopy fisotroana voromailala mandeha ho azy
Anaran'ny vokatra Kopy fisotroana voromailala mandeha ho azy
Weight 0.015kg / PC
Color Mena, mainty, mavo
endri-javatra Tsy misy mitete, maharitra
Fampiasana ho an'ny akoho, tranom-borona sns
Application akoho, vorona, papelika, biby
habe 5cm * 3.5cm4.8cm * 3.7cm
1. Ny amboaran-dronono misotro nono dia fomba iray vaovao hanomezana rano madio ho an'ny andian'ondrinao. Rehefa misotro vorona ny vorona, dia vaky ny kiheba feno loharano, mamoaka rano bebe kokoa ao anaty kaopy.
2. Ireo mpanondraka amin'ny tanindrazana kosa dia mila diovina ary hofenoina matetika, ary mora voan'ny loto.
3. Ny nosy fisotroana nono akoho dia azo apetraka ao amin'ny sisiny na eo ambanin'ny fitoeran-javatra iray toy ny siny mampiasa ny fitaovana enti-manana fametrahana.
4. Ho an'ny vahaolana "on demand" mandeha ho azy, diniho ny kitapo fanondrahana akoho amam-borona Backyard Flock.
5.Ampy rehetra azo ampiana amin'ny rafitra manondraka mitovy na misaraka amin'ny rafitra samihafa Mifandray mivantana amin'ny PVC miaraka amin'ny fononteny
Previous: Kitapo fisotro rano kisoa mandeha ho azy
Manaraka: Amboara mpamahana rano amin'ny voromailala
Sakafo fisotro zava-pisotro papelika
Amboara mpamahana rano amin'ny voromailala